Isolate Gown Fekitori | Wholesale Isolate Gown Vagadziri uye Vatengesi
Disposable refu ruoko zvokurapa kuvhiya voga gown mugadziri
Zvigadzirwa zvedu zvakasimba uye zvinogara, zvinokwanisa kurarama nebasa rakaomarara zvichiri kugadzikana kufema uye kushanduka. Izvo zvakagadzirwa neyakareruka multilayer zvinhu kuona shuwa kuramba. Yakagadzirirwa kukodzera varume nevakadzi veese maumbirwo, elastic cuffs nemabhanhire akagadzirirwa kupa nyaradzo uye kushanduka panguva imwe chete.
Kupisa kutengesa bule isapinda isina kuraswa ruoko rurefu PP + PE kusarudzika gown
yedu inoraswa Isolate maGown akagadzirwa neanoshanda kwazvo kusefa ekuchengetedza zvinhu. Iwo akaumbika muchimiro uye anogona kunyatsovhara zvinwiwa uye maumburu uye ine nyaradzo yakanaka, gadzirisa kuomarara pachiuno nemabhandi erabha Loose dhizaini dhizaini kuti usangane ako akasiyana zviitiko
bhuruu Yakakwira Mhando yekurapa inoraswa yakaparadzaniswa gown Mutengesi
Ichi chigadzirwa isuppable bhuruu yekuzviparadzanisa sutu ine huremu hwe50gsm. Izvo zvinhu i Polyester. Iyo ine yakanaka mvura kuramba. Chigadzirwa chine machira akakwenenzverwa uye dhizaini yekugadzirisa chiuno, iyo inogona kugadziridzwa zvakanaka kune vanhu vane akasiyana maumbirwo emuviri.
Yakanakisa sarudzo inoraswa yekurapa yekuzvipfekedza gown gadzira
Zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa zvinoenderana nemamiriro ekushandisa chaiwo. Makapu ezvigadzirwa zvakagadzirwa nenzira yeelastically kuti zviite zvakachengeteka uye zvinodzivirira, bhanhire rakasununguka rinoita kuti tiwedzere kugadzikana uye nyore pabasa.